रुसी वैज्ञानिकको निश्कर्ष – गाईको गहुँतबाट हुन्छ १४८ प्रकारका रोग निको !::Leading Nepal News
काठमाडौँ, – स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
यी राशिका व्यक्तिले सधैँ पाउँछन् जीवनमा सफलता !
स्वस्थ हुन यस्तो ब्रेकफास्ट खानुहोस्…..
यि हुन् गर्मीमा दही खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरु.
थाहापाइराख्नुहोस्….यी जीव घरमा पसे यस्तो फल मिल्छ !
यी राशीका व्यक्ति हुन्छन् सबैभन्दा धनी….
यस्ता बानी आजै छोड्नुहोस्, नत्र कंगाल बन्नुहोला !
यस्ता महिलाले परिवारलाई बनाउँछन् समृद्ध…